Studer Trust English Online Course
In prior articles, we’ve shared reports of how our standard Teacher Training Center (TTC) courses [links] have been adapted to online modules to accommodate COVID-19 restrictions and make sure our teachers and communities are safe. With each training, we’ve learned more and more about how to effectively bring in tools and methodologies to best cateradigital learning experience. As of October, Myanmar was in the midst ofasecond wave of COVID-19 cases, and we therefore had to developacurriculum online for our English course as well. Our goal was to help graduates of our English Teacher Training deepen and expand their knowledge, and we chose to use Rosetta Stone as the resource to help us do so digitally.
23 participants wereapart of the training which began in October and lasted nine weeks. Throughout the course, TTC provided the Rosetta Stone application to all attendees. This was supported by twice-weekly conversation groups, divided by English level, in which participants had open-form conversations to provide forapersonalized and accessible learning environment. Students then also followed up each group withajournal entry. After all weekly assignments were completed, the trainers conductedaweekly review session to address pronunciation, vocabulary, grammar and sentence structure, and formulated exercises according to the common weak points. Trainees were assessed three times throughout the course—a pretest, and interim evaluation, andafinal exam. All aforementioned tests were generated by the Rosetta Stone application.
Asaresult of the training, 70% of participants advanced at least one level up in their Common European Framework of Reference for Languages exams, and all students showedamarked improvement in their assessments. Most excitingly, all trainees invested time into learning the and using the Rosetta Stone platform fromaminimum of 170 hours to some students using it 600 hours throughout the duration of the course. For this reason we see value in Rosetta Stone asatool, whether or not COVID-19 restrictions are in place, and we plan on integrating it into future English curriculums. Here areafew comments from the participants:
“All activities are good because they all are linked each other to improve our English skills. There they all should be used as they are in the next trainings.”
“I improved vocabularies, pronunciation, listening, and grammar and so on by doing the Rosetta stone lessons. I could guess the correct answer by looking at the picture in listening part. I also found out some teaching techniques in the app.”
“Because of Conversation practice, I am not afraid of speaking English and being corrected our mistakes, I came to know my weaknesses and I could expend the conversation by using the language guide.”
“Due to the lessons from Conversation and Free Conversation Practices, I could speak English confidently. As the trainers correct my mistakes while practicing, It’s more flexible to speak English. I also learnt new sentence structures and new vocabularies.”
“The most I like from this course is that the trainers support and help us from all rounds and teach us punctually according to the timetable. They are really admirable.”
Ultimately, this pilot taught usalot about how to create more dynamic, personalized and effective learning experiences. The Studer Trust Teacher Training Center (ST-TTC) would like to express its appreciation to the participants for their active participation and enthusiastic learning throughout the course. Because of them, the ST-TTC is able to deliveravariety of courses, and continuously makealasting impact on the communities we serve. Most importantly, TTC also would like to acknowledge and thank the TTC’s donor, the Wai Yan Association. Without their support, these trainings would not be possible.
Studer Trust အွန်လိုင်း အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း
ဆရာဖြစ် လေ့ကျင့်သင်တန်းကျောင်း (TTC)၏ သင်တန်းများ (link) အား COVID-19ကြောင့် ဆရာ/မ များ ဘေးကင်းစေရန်နှင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် အညီ လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ဆရာ/မ မွန်းမံသင်တန်းများ၏ အစီရင်ခံစာများကိုလည်း ရှေ့ ဆောင်းပါးများတွင် ဖော်ပြပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းများ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ပြုလုပ်လာခဲ့သည်နှင့်အမျှ ဒီဂျစ်တယ် စာသင်ခန်းများ ပြုလုပ်ရာတွင် မည်သည့် ကိရိယာ၊ မည်သည့် နည်းစနစ်ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုလျှင် ပိုမို ထိရောက်မည် ဆိုတာကိုလည်း နားလည် သဘောပေါက်လာခဲ့ရပါသည်။ အောက်တိုဘာလအရောက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် COVID-19 ဒုတိယလှိုင်းနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကိုလည်း အွန်လိုင်း သင်တန်းအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပန်းတိုင်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာဖြစ်သင်တန်းမှ အောင်မြင်သွားသူများအား သင်ကြားရေး အသိများ ပိုမိုဖြန့်ကျက်ပေးနိုင်ဖို့ကို ကူညီပေးရန်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့အား ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရန်အတွက် Rosetta Stone အား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
အောက်တိုဘာလတွင် စတင်ခဲ့သော ကိုးပတ်ကြာ သင်တန်းတွင် သင်တန်းသား ၂၃ ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းတလျောက်တွင် TTC မှ Rosetta Stone application အား သင်တန်းသားအားလုံးအား ပေးသုံးခဲ့ပါသည်။ ဤသင်တန်းအား အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ဖြင့် အုပ်စုများ ဖွဲ့ကာ တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်သည့် အဖွဲ့လိုက် ဆွေးနွေးပွဲများလည်း စီစဉ်ထားခဲ့ပြီး ဤဆွေးနွေးပွဲများတွင် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုလေ့ကျင့်နိုင်သောကြောင့် သင်တန်းသားတစ်ဦးစီနှင့် ကိုက်ညီပြီး သင်တန်းသားတိုင်း လက်လှမ်းမီနိုင်သော သင်ကြားရေးဝန်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းသားများမှ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီအားလည်း မှတ်တမ်းများမှတ်သားခြင်းဖြင့် ပြန်လည်စစ်ဆေးခဲ့ကြပါသည်။ အပတ်စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးပြီးသွားသည့်အခါ အသံထွက်၊ ခက်ဆစ်၊ သဒ္ဒါနှင့် ဝါကျတည်ဆောက်ပုံတို့ကို စစ်ဆေးရန်အတွက် သင်တန်းနည်းပြများမှ အပတ်စဉ် ပြန်လည်စစ်ဆေးရေး အချိန်များ သတ်မှတ်ပြီး စစ်ဆေးခဲ့ကာ ဘုံ အားနည်းချက်များပေါ်မူတည်၍ လေ့ကျင့်ခန်းများလည်း စီစဉ်ပေးခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းသားများအား သင်တန်းတစ်လျောက်တွင် စုစုပေါင်း သုံးကြိမ် စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်း စစ်ဆေးမှုများတွင် အစမ်းစာမေးပွဲတစ်ခု၊ သင်တန်းလယ် စစ်ဆေးမှုတစ်ခုနှင့် နောက်ဆုံးစာမေးပွဲတစ်ခုတို့ပါဝင်ပါသည်။ အထက်ပါ စာမေးပွဲများအားလုံးအား Rosetta Stone application မှ ရေးဆွဲပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်း၏ ရလဒ်အနေနှင့် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသော သင်တန်းသားများသည် ၎င်းတို့၏ Common European Framework of Reference for Languages စာမေးပွဲများတွင် အနည်းဆုံး အဆင့်တစ်ဆင့် တိုးတက်သွားခဲ့ပြီး သင်တန်းသားအားလုံးတွင်လည်း ၎င်းတို့၏ စာမေးပွဲများတွင် သိသာသော တိုးတက်မှုများ တွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ပို၍ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်မှာ သင်တန်းတလျောက်တွင် သင်တန်းသားအားလုံးမှ Rosetta Stone application အား အနည်းဆုံး နာရီ ၁၇၀ အသုံးပြုခဲ့ပြီး သင်တန်းသားအချို့မှာမူ နာရီ ၆၀၀ အထိ အသုံးပြုခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဤအကြောင်းပြချက်ကြောင့် COVID-19 ကန့်သတ်ချက်များ ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ Rosetta Stone ဟာ ထိရောက်မှုရှိတဲ့ ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သိရှိခဲ့ရပြီး အနာဂါတ်တွင် အင်္ဂလိပ်စာသင်ရိုးများ၌ ထည့်သွင်းရေးဆွဲရန် စီစဉ်နိုင်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသားအချို့၏ ထင်မြင်ချက်များကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
“လုပ်ငန်းစဉ်တွေအားလုံးဟာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အင်္ဂလိပ်စာ စွမ်းရည်ကို တိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်ရာမှာ ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ နောက်လာမယ့် သင်တန်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုးပဲ ဆက်သုံးသင့်ပါတယ်။”
“Rosetta Stone သင်ခန်းစာတွေကြောင့် ကျွန်မရဲ့ ခက်ဆစ်တွေ၊ အသံထွက်တွေ၊ အကြားစွမ်းရည်တွေနဲ့ သဒ္ဒါတွေ တိုးတက်လာပါတယ်။ အကြားစွမ်းရည်လေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာ ပုံတွေကို ကြည့်ရုံနဲ့ကို ကျွန်မ အဖြေကို ခန့်မှန်းနိုင်နေပါပြီ။ Application ထဲမှ သင်ကြားရေး နည်းစနစ်အချို့ကိုလည်း တွေ့ခဲ့ပါတယ်။”
“အချင်းချင်း ဆွေးနွေးပြောဆိုတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကြောင့် အခုဆို အင်္ဂလိပ်လိုပြောရမှာ၊ အမှား ပြင်ခံရမှာကို မကြောက်တော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ကျွန်တော်အခုသိသွားပြီး ဘာသာစကား လမ်းညွှန်ကိုသုံးပြီးတော့ ကျွန်တော့် အပြောစွမ်းရည်ကို တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ပါပြီ။”
“စကားပြောဆိုခြင်းနှင့် အလွတ်တမ်း စကားပြောဆိုခြင်း လေ့ကျင့်ခန်းတွေကြောင့် အခုဆိုရင် ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာကို ယုံကြည်မှုရှိစွာ ပြောနိုင်ပါပြီ။ လေ့ကျင့်နေတုန်းမှာလည်း နည်းပြတွေက အမှားတွေပြင်ပေးတဲ့အတွက် အင်္ဂလိပ်စကားပြောရတာ ပိုပြီး လိုက်လျောညီထွေရှိလာပါပြီ။ ဝါကျတည်ဆောက်ပုံအသစ်တွေနဲ့ စကားလုံးအသစ်တွေလည်း သိခဲ့ရပါတယ်။”
“သင်တန်းမှာ အကြိုက်ဆုံးကတော့ နည်းပြတွေက အတန်းတိုင်းမှာ ကျွန်မတို့ကို ထောက်ပံ့ ကူညီပေးပြီးတော့ အချိန်စာရင်းနဲ့ တစ်သားတည်းဖြစ်အောင် တိတိကျကျသင်ပေးတာပါပဲ။ သူတို့က တကယ်ကို လေးစားစရာကောင်းပါတယ်။”
နောက်ဆုံးမှာတော့ ဤရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မှုဟာ ပိုမိုသွက်လက်ပြီး လူတစ်ဦးစီအလိုက် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသည့် သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံတစ်ခု ဖန်တီးနိုင်စေရန် များစွာ ထောက်ပြပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ တက်ရောက်ပေးခဲ့တဲ့ သင်တန်းသားအားလုံးကို သင်တန်းတလျောက် တက်ကြွစွာ ပါဝင်သင်ယူပေးခဲ့တဲ့အတွက် Studer Trust Teacher Training Center (ST-TTC) မှ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့ကြောင့်ပဲ ST-TTC ဟာ သင်တန်းပေါင်းစုံကို ပို့ချပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ လက်လှမ်းမီရာ ဝန်းကျင်များတွင်လည်း ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မည့် အကျိုးဆက်များ ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အရေးအကြီးဆုံးအနေနှင့် TTC ရဲ့ အလှူရှင်ဖြစ်သည့် Wai Yan Association ကိုလည်း အသိအမှတ်ပြု ကျေးဇူးတင်လိုပါသည်။ ၎င်းတို့၏ အထောက်အပံ့မရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ သင်တန်းများအားလုံးအား ပြုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။